ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင် - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / အလုပ်အကိုင် / ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဘက်တွင်ခိုင်မာသောအမှတ်တံဆိပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးဖောက်သည်အုပ်စုအချို့ကိုသင်၏လိုအပ်ချက်များအရသင်၏ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ထုတ်ကုန်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲလိမ့်မည်။ ဒီဇိုင်းအစမှ 2-3 လသည်ထုတ်ကုန်အသစ်များအောင်မြင်မှုအတွက်ဒီဇိုင်းအစမှ3လခန့်ကြာသည်။ စီးပွားရေးနှင့်ဆက်နွှယ်ရန် link တစ်ခုချင်းစီ၏ဆက်နွှယ်မှုတစ်ခုစီကိုတာဝန်ခံသူရှိလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျွမ်းကျင်သောနည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သမားများ, အများစုမှာအများစုမှာဟာ့ဒ်ဝဲလုပ်ငန်းတွင် 10 နှစ်ကျော်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးတည်ငြိမ်မှုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန် output သည်တစ်လလျှင်ယူနစ် 300,000 ဖြစ်သည်။ လိုအပ်ပါကကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုတစ်လလျှင် 500,000 အထိတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
ပြီးနောက် - အရောင်းဝန်ဆောင်မှု
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အစုအဝေးတစ်ခုပြင်ဆင်ထားမည်ဖြစ်ပြီးဖောက်သည်တစ် ဦး သည်ထုတ်ကုန်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိပါကကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ အကယ်. ထုတ်ကုန်သည်2နှစ်အတွင်းပျက်စီးသွားပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးလိမ့်မည်။ အရည်အသွေးရှိတဲ့ပြ problem နာတစ်ခုရှိရင်အဲဒါကိုထုတ်ကုန်အသစ်နဲ့အခမဲ့အစားထိုးမှာပါ။
ယခုအဓိကအားဖြင့်လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်းများရောင်းဝယ်ခြင်း, အိမ်ထောင်စုကိရိယာအစုံနှင့်အခြားအိမ်ခြံမြေစျေးဗီဆိုင်များနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများကို Tmall နှင့် Taobao တို့တွင်ရောင်းချသောပြည်တွင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်ထုတ်ကုန်အသစ်များတိုးချဲ့ရန်တောင်းဆိုမှုများနှင့် ပတ်သက်. အလွန်အကောင်းမြင်ကြသည်။
0 န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်မိမိ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အပေါ် အခြေခံ. ပဏာမဒီဇိုင်းရှိသည်။ သို့သော်သူသည်ကုန်ပစ္စည်းကိုကောင်းစွာမသိသောကြောင့်, ဤဒီဇိုင်းကိုတိုက်ရိုက်မသုံးနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်ဖောက်သည်များဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရမည်ကိုနားလည်ရန်ဖောက်သည်များနှင့်ပဏာမအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုများပြုလုပ်သည်။ ဤအဆင့်သည်ဖောက်သည်၏အယူအဆနှင့်အမှတ်တံဆိပ်တန်ဖိုးဒီဇိုင်းကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်အောင်သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုများနှင့်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဖောက်သည်များသည်နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းနှင့်အလွန်ကျေနပ်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပေးပို့ခြင်းမှဒီဇိုင်းမှ3လကြာခဲ့သည်။ ပထမအကြိမ်မှာယူနစ် 30,000 ရှိပြီးဝယ်သူသည်ကြော်ငြာကုန်ကျစရိတ်များတွင်ယွမ် 600,000 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ တစ်ပတ်လျှင်ယူနစ် 20000 ကိုရောင်းချခဲ့ပြီးနောက်ယူနစ် 100,000 ကိုထုတ်လုပ်ရန်အလျင်အမြန်ပြေးသွားခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအားအရည်အသွေးပြ problems နာများအတွက်အခမဲ့အစားထိုး0န်ဆောင်မှုပေးသော0န်ဆောင်မှုများကိုပေးပို့သည်,